एनआरएनलाई शेयर बजारमा भित्र्याउने कुरा कता हरायो ? - Aarthiknews
काठमाडौंं । नेपालको शेयर बजारमा मार्केट मेकर र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई भित्र्याउनु पर्छ भन्न थालिएको करिव दशक भएको छ । बारम्बार उठने तर कार्यान्वयन नहुने भएकाले होला अहिले लगानीकर्ता ती बिषय उच्चरण गर्न र सुन्न पनि चाहँदैैनन् ।
यी दुई बिषय शेयर बजारमा मन्दी आएका बेला सुधारको गफ गर्ने मेलो मात्र बन्ने गरेको छन् । बजार बढ्दा खासै नउठने मार्केट मेकर र एनआरएनको बिषय शेयर बजार ओरालो लागेको समयमा मात्र उठने गर्छन् ।
संस्थागत लगानीकर्ता अर्थात मार्केट मेकर भित्र्याउने कुरा पनि एक दशकदेखि नै चल्दै आएको छ । करिव एक दशक अघिदेखि नै बजार उच्च दरमा घट्दा सेयर किन्ने र बढ्दा बेचेर बजारलाई स्वभाविक गति दिनेगरि मार्केट मेकर अर्थात बजार निर्माता ल्याउने पहल थालिएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले मार्केट मेकर सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको पनि धेरै भइसकेको छ । कम्तिमा पाँच अर्बको कोष बनाएर नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई मार्केट मेकरको रुपमा भित्र्याउने पहल भएको पनि लामो सयम भएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।
यसैगरी, एनआरएनलाई भित्र्याउने कुरा पनि मार्केट मेकरलाई शेयर बजारमा भित्र्याउने जस्तै भएको छ । शेयर लगानी कर्ताले पनि एनआरएनलाई भित्र्याउनु पर्छ भन्दै आएको पनि एक दशक नै भएको छ । शेयर बजार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि एनआरएनलाई शेयर बजारमा भित्र्याउन आवश्यक नीति बनाउन लागिपरेका छौ भन्न लागेको पनि बर्षौ भयो । आवश्यक नीति निर्माण गर्न नसक्दा एनआरएनलाई शेयर बजारमा भित्र्याउन सकिएको छैन ।
धितोपत्र बोर्डले एक दशक अगाडिदेखि नै ५ वर्षे गुरु योजना तयार पारेको थियो । त्ससबेला तयार पारेको गुरु योजनामा एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले समेत पुँजी बजार विकासका लागि एनआरएनको आबश्यकता महशुस गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई मुख्य काम ठानेर प्राथमिकताको सूचीमा राखेको थियो । तर, बाग्मतीमा धेरै ढल बग्दा पनि काम भने अझै उस्तै छ । एक दशक अघि अर्थ मन्त्रालयले नै देखाएको सपना अहिलेसम्म साकार हुन भने सकेको छैन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा ‘गैर आवासीय नेपालीहरुले दोस्रो बजारमार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने गरी पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाइने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सुरेन्द्र पाण्डेले ल्याएको बजेटमा पुँजी बजारमा पनि एनआरएनलाई भित्र्याउने उल्लेख छ । आव २०७०/७१ मा शंकरप्रसाद कोइरालाले र आव २०७१/७ २ मा डा. रामशरण महतले ल्याएको बजेटले त्यही कुरा दोर्होयाइएको छ ।
एनआरएनलाई पुँजी बजार भित्र्याउनका लागि पहल गर्ने भनेपनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । आवश्यक नीति नियम नभएको कारण एनआरएनलाई शेयर बजारमा भित्र्याउन सकिएको छैन् ।
मार्केट मेकर र एनआरएनलाई शेयर बजारमा भित्र्याउने भन्ने कुरा पनि छेपाराको उखान जस्तै भएको छ । जाडो भएर रातभरी कठग्रिदा छेपाराले भोली त घर नवनाइ छाडदिन भन्छ, भोली पल्ट दिनको रापिलो घामले उसको त्यो घर बनाउने सपना तुहिन्छ । शेयर बजारमा पनि मार्केट मेकर र एनआरएन भित्र्याउने कुरा पनि त्यस्तै भएको छ । बजार ओरालो लाग्दा मार्केट मेकर र एनआरएनको आवश्यकता महशुस हुन्छ, बढ्यो भने दुई बिषय नै सेलाउन पुग्छन् ।